ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာရောက်ချင် ကစားချင် နေခဲ့တဲ့ PSG နောက်ခံလူ ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ် – Zeekwat Hot News
ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာရောက်ချင် ကစားချင် နေခဲ့တဲ့ PSG နောက်ခံလူ ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ်
May 17, 2019097
လက်ရှိ အချိန် အထိ တော့ ဘရာဇီး လက်ရွေးစင် ညာ နောက်ခံလူ ဟာ စပိန် လာလီဂါ မှာ ဘာစီလိုနာ ၊ အီတလီ စီးရီးအေ မှာ ဂျူဗင်တပ် နဲ့ ပြင်သစ် လီဂူး ဝမ်း မှာ PSG အသင်း တွေနဲ့ အတူ ဆု ဖလား အောင်မြင် မှုတွေ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့သူ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။PSG အသင်း ကတော့ ဒီ ရာသီ အသင်း မှာ ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ ပြသ နိုင် ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး လက်ရွေးစင် ကို နောက် ထပ် 1 နှစ် စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့် လိုနေ ပေမဲ့
ထူးခြား မှု မရှိ သေးပဲ အဲလ်ဗတ်စ် ရဲ့ တုန့်ပြန် မှုကို ပြန်လည် စောင့်ဆိုင်း နေရ တဲ့ အတွက် စိတ်ပျက် နေခဲ့ ပါတယ် ။ဘရာဇီး အခြေစိုက် သတင်းစာ ဖြစ်တဲ့ UOL ကတော့ အဲလ်ဗတ်စ် ဟာ အသင်း ဖက်မှ2နှစ် စာချုပ် နဲ့ ကမ်းလှမ်း တာကို အလို ရှိ နေကြောင်း ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂ် ကလပ် တွေရဲ့ ဖိတ်ခေါ် မှုကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ် လို့ သိရှိ ရပြန် ပါတယ်
။အကယ်လို့ သူ PSG အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း မတိုးမီ ပရီးမီးယား လိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် တစ်သင်း သင်း က လာရောက် ကစား ဖို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ ပါက သူဟာ အင်္ဂလန် မြေ အထိ ပါ နယ်ချဲ့ သွားဖို့ အတွက် ဆန္ဒ ရှိနေ တယ်လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။အဲလ်ဗတ် ဟာ 2017 ခုနှစ် တုန်းက PSG အသင်း ဆီ မပြောင်း ရွှေ့မီ ပရီးမီးယား လိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ မန်စီးတီး နဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်း တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား မှုကို ခံခဲ့ ရပါ သေးတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂျသို့ ပွောငျးရှလေ့ာရောကျခငျြ ကစားခငျြ နခေဲ့တဲ့ PSG နောကျခံလူ ဒနျနီအဲလျဗတျဈ
လကျရှိ အခြိနျ အထိ တော့ ဘရာဇီး လကျရှေးစငျ ညာ နောကျခံလူ ဟာ စပိနျ လာလီဂါ မှာ ဘာစီလိုနာ ၊ အီတလီ စီးရီးအေ မှာ ဂြူဗငျတပျ နဲ့ ပွငျသဈ လီဂူး ဝမျး မှာ PSG အသငျး တှနေဲ့ အတူ ဆု ဖလား အောငျမွငျ မှုတှေ ရယူ ထားနိုငျ ခဲ့သူ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။PSG အသငျး ကတော့ ဒီ ရာသီ အသငျး မှာ ခွစှေမျး ကောငျးတှေ ပွသ နိုငျ ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး လကျရှေးစငျ ကို နောကျ ထပျ 1 နှဈ စာခြုပျ သကျတမျး တိုးမွှငျ့ လိုနေ ပမေဲ့ ထူးခွား မှု မရှိ သေးပဲ အဲလျဗတျဈ ရဲ့ တုနျ့ပွနျ မှုကို ပွနျလညျ စောငျ့ဆိုငျး နရေ တဲ့ အတှကျ စိတျပကျြ နခေဲ့ ပါတယျ ။ဘရာဇီး အခွစေိုကျ သတငျးစာ ဖွဈတဲ့ UOL ကတော့ အဲလျဗတျဈ ဟာ အသငျး ဖကျမှ2နှဈ စာခြုပျ နဲ့ ကမျးလှမျး တာကို အလို ရှိ နကွေောငျး ဖျောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ အခွား တဈဖကျ မှာတော့ သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂျ ကလပျ တှရေဲ့ ဖိတျချေါ မှုကို စောငျ့ဆိုငျး နတေယျ လို့ သိရှိ ရပွနျ ပါတယျ ။အကယျလို့ သူ PSG အသငျး နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး မတိုးမီ ပရီးမီးယား လိဂျ ထိပျသီး ကလပျ တဈသငျး သငျး က လာရောကျ ကစား ဖို့ ကမျးလှမျး ခဲ့ ပါက သူဟာ အင်ျဂလနျ မွေ အထိ ပါ နယျခြဲ့ သှားဖို့ အတှကျ ဆန်ဒ ရှိနေ တယျလို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။အဲလျဗတျ ဟာ 2017 ခုနှဈ တုနျးက PSG အသငျး ဆီ မပွောငျး ရှမေီ့ ပရီးမီးယား လိဂျ ထိပျသီး ကလပျ တှေ ဖွဈကွ တဲ့ ခြဲလျဆီး ၊ မနျစီးတီး နဲ့ ယူနိုကျတကျ အသငျး တှရေဲ့ စိတျဝငျစား မှုကို ခံခဲ့ ရပါ သေးတယျ ။
Hey Buddy!, I found this information for you: "ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာရောက်ချင် ကစားချင် နေခဲ့တဲ့ PSG နောက်ခံလူ ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/943. Thank you.